Wasaaradda Diinta oo beenisay inay ammartay xidhista Masaajidad | Berberanews.com
Home WARARKA Wasaaradda Diinta oo beenisay inay ammartay xidhista Masaajidad
Wasaaradda Diinta oo beenisay inay ammartay xidhista Masaajidad
Wasaaradda Diinta iyo Aw-qaafta Jamhuuriyadda Somaliland ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay kaga hadashay sidii la isku waafajin lahaa cibaabadda masaajidadda iyo xannuunka Coronavirus.
Sidaasna waxa lagu sheegay war-saxaafeed uu galabta soo saaray wasiirka Diinta iyo Aw-qaafta Somaliland mudane Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed, kaas oo nuqul ka mid ahi soo gaadhay Berberanews, waxaanu u dhignaa sidan:-
3.Waxa ay Wasaaraddu aamminsantahay sida Dhakhaatiirtuba caddeeyeen, in ay halis caafimaad tahay isu-imaanshiyaha bulsho ee ay Masaajiddada isugu imanayaan, maaddaama la caddeeyey in xanuunkani ka hortag mooyaane aanu lahayn ka daba tag, si xawli ahna u faafayo. Waxa aynu ognahay siduu uu u dhibaateeyey una aafeeyey xanuunkani dalalkii dadkoodu ka baaqsadeen in ay maqlaan talooyinka caafimaad ee la siiyey.
4-Waxa ay Wasaaraddu ugu baaqaysaa Culimada in aanay ku deg-deg degin in ay bulshada la wadaagaan warar aan la hubin.
5- Wasaaraddu, waxay u mahad-celinaysaa guud ahaan Culimada dalka, sida ay mar kasta ula garab taagan yihiin wacyigelinta xannuunkan.
Previous articleWasaaradda shaqada oo amaro dul dhigtay shirkaddaha
Next articleWasaaradda Gaadiidka Somaliland oo hirgelisay ammarro ka soo baxay Guddida ka hortagga Covid-19